Wednesday April 28, 2021 - 00:19:21 in Wararka by Super Admin
Hargeysa (Xogreebnews)–The Storm Media oo ka mid ah Hay’adaha Warbaahineed ee laga leeyahay dalka Taiwan, ayaa War-bixin dheer ka qoray Xidhiidhka diblumaasiyadeed ee Somaliland iyo Taiwan.
War-bixinta oo sidoo kale lagu faaqiday Istaraatiijiyadda dhuleed ee Somaliland iyo xidhiidha bilowga ah ee Somaliland la leedahay Dalalka Qaniga ah ee bariga dhexe, sida Imaaraadka Carabta, ayaa waxa Ciwaan looga dhigay "Somaliland Oo Ah Saaxiibka Cusub Ee Taiwan, Waxay Door Muhiim Ah Ka Noqotay Istaraatiijiyadda Dalalka Qaniga Ah Ee Bariga Dhexe..”
"Hadda waxaa loo beddelayaa Deked ganacsi oo xor ah.” ayay War-bixintu sheegtay, waxayna intaa raacisay in Maalgeliyaha ugu weyn ee Dekedda Berbera ay tahay Shirkadda Imaaraatka laga leeyahay ee DP World, oo heshiis la saxeexatay dawladda Somaliland sanadkii 2016 inay Dekedda Berbera ku Maalgelinayso $ 442 milyan oo dolar, Itoobiyana waxay ku biirtay saamilayda Maalgelinta sannadkii 2018.
Dhinaca kale, Itoobiya oo aan lahayn dekedo dibadeed, ayaa War-bixinta lagu sheegay inay dekedda Berbera aad muhiim ugu tahay, sidoo kalena ay Itoobiya si firfircoon uga qayb-qaadanayso maalgelinta dhismaha "Wadada Berbera” iyo waddo tareen oo ka baxda Berbera.
Wasiirka Maalgeshiga Somaliland Maxamed Axmed Cawed oo la hadlay The Storm Media, ayaa carrabka ku adkeeyay in Somaliland leedahay dekedda Berbera, Somaliland-na ay ku fadhido Mowqif muhiim ah xagga siyaasadda iyo Juquraafi ahaanba "Qiyaastii 30% ganacsiga Adduunka wuxuu maraa Gacanka Cadan, markaa waxaanu isku taagaynaa sidii aanu u noqon lahayn albaabka laga soo galo Afrika.”ayuu hadalkiisa raaciyey Wasiir Cawed.
Dhinaca kale, Luo Zhenhua oo ah La Taliyaha Wasaaradda Arrimaaha Dibedda ee Taiwan ee dhaqanka iyo dhaqaalaha ee dalka Sucuudiga, ayaa Waraysi uu siiyey Idaacadda BBC-da ee dibedda la hadasha wuxuu sheegay "Somaliland waa albaabka ay Taiwan ka soo gasho Bariga Afrika.” Ayuu yidhi, waxaanu intaa ku daray "Uma baahnin inaan raadsano madaxbannaani, maxaa yeelay waxaan horey u nahay dalal madaxbanaan. Waxa aan labadeenuba u baahanahay waa aqoonsi diblomaasiyadeed”
Wasiir ku-xigeenka Arrimaha dibedda Somaliland, ahna ku-simaha Wasiirka Liibaan Yuusuf Cismaan ayaa isaguna sheegay "Waxaan noqon karnaa Taiwanta Geeska Afrika, Waayo? Taiwan waa tusaale guul leh.”
Wasiirka Maalgeshiga Somaliland waxa uu mar kale sheegay "Dekedda Berbera way ka weynaan doontaa dekedaha kale ee Bariga Afrika” ayuu yidhi.